Bedroom Ruvara Zvirongwa - Ita Kuti Kurara Kwako Kuve Nake Nekusarudza Iyo Yakarongeka Wall Paint Ruvara - Bedroom Colour Schemes
Bedroom Ruvara Zvirongwa – Ita Kuti Kurara Kwako Kuve Nake Nekusarudza Iyo Yakarongeka Wall Paint Ruvara
Wakanga uchiziva here kuti ruvara rwekamuri yemadziro yekurara runokanganisa zvakanyanya kunaka kwezororo? Kunze kwekukwanisa kugovera mamiriro akagadzikana, kusarudza yakakodzera imba yekupenda ruvara inogona kuve nehunhu hwakanaka pahutano hwepfungwa.
Imba yekurara iine basa rayo huru senzvimbo yekuzorora mushure mezuva rinonetesa rezviitiko, tisingazvizive zvakare inova nzvimbo iyo isu yatinodzora ‘kushushikana mupfungwa’, kupusa, kana nzvimbo yekuverenga mabhuku kana kuona terevhizheni uchirara pasi usinga kuvhiringidzwa nevamwe.
Nehurombo, vazhinji havanzwisise kuti vangasarudza sei rorudyi pendi pendi kuti riiswe mukamuri yake yekurara. Kunyanya, iyo ruvara yakasarudzwa ndeye inodiwa / inodiwa ruvara kana chena ine yakachena kana yakajeka chikonzero. Muchokwadi, ruvara rumwe nerumwe runoita zvakasiyana. Kusarudzwa kwemavara asina kukodzera kunogona kukonzera kushushikana, kukanganisa kukanganisa kudzikira, uye kungoita kuti iwe utadze kuzorora nekuti iwo mavara anoshandiswa mupfungwa anokurudzira.
Yakakurudzirwa Bedroom Ruvara Schemes yeBedroom Wall Paint
Iyi inotevera ndiyo imba yekurara iyo yatakasarudza kuti ikubatsire kuzorora zvakanyarara uye zvakanaka.
Kamuri Yekurara Ruvara # 1: Girini
Ruvara rwegirini runofungidzirwa kuti rwunopa fungidziro yekamuri yakasarudzika kamuri kuitira kuti ipe mamiriro ezvinhu akanaka mukamuri. Ruvara runosanganiswa nemavara echisikigo, semashizha, huswa, mhepo yemakomo inoita kuti nzvimbo yemukamuri riwedzere kusununguka uye kugadzikana.
Sarudza mashizha akasvibira, girini yakasvibira kana grey-green. Iyo yakadzikama uye isingaenzanisiki mavara ekupenda rusvingo urwu kunze kwekukonzera kugadzikana kunogona kubatsira kumisa pfungwa dzemunhu kuti dzinzwe kuzorodzwa nekukurumidza pandinomuka. Mhedzisiro yacho kurara kwakazorora uye kunobatsira usimbe mushure mekumuka uye kunoita kuti unzwe kuzorodzwa uye kuwedzera simba.
Kamuri Yekurara Ruvara # 2: Bhuruu
Kunze kwegirini, iwe unogona kusarudza bhuruu semuvara unomiririra zvisikwa. Chiedza bhuruu, grey-bhuruu, kana bhuruu turquoise ichakutora sekunge uri pamucheto wegungwa. Iko kwechisikigo, kwakachena, kwakapenya, uye kwakanaka kutaridzika kunotakurwa neruvara urwu kuchaita kuti kurara kwako kunakidze.
Kungofanana neruvara rwegirini, kuiswa kwemadziro ekupenda madziro neblue kunogona kupawo mamiriro ezvinhu akanaka. Kunyangwe ichisanganiswa nemavara ayo anogona kusimudza, bhuruu rinounza kutonhora funganyo kuitira kuti iwe uve nyore kurara.
Kamuri Yekurara Ruvara # 3: Beige
Beige, iri musanganiswa webrown nechena, inosanganiswa neruvara nyoro uye yakadzikama. Ruvara urwu runogona kuita kuti vanhu vari mariri vanzwe kugadzikana uye vagadzikane kuti vazorore. Ndosaka ruvara urwu ruchishandiswa zvakanyanya mumahotera enyeredzi kuita kuti vashanyi vavo vanzwe vari kumba.
Kamuri yeMubhedha Ruvara # 4: Grey
Sanganisa iro grey color pamadziro nemapuranga pasi, ipapo kamuri inonzwa kudziya uye yakagadzikana ichaita kuti mhando yekuzorora kwako ive nani. Kunyangwe ichisanganiswa nemavara akasimba uye emazuva ano, kusarudza iwo ruvara semuvara wependi yako yekurara unogona kupa kuratidzika kwewakakura uye wakachena. Iyo yakakodzera kumakamuri madiki ekurara.
Zvino, ndeupi waunofunga kuti ruvara rwependi rwemadziro rwaungasarudze? Ah hongu, ramba uchifunga kuti kuti uwane mamiriro ekunze mukamuri yekurara, saka chinhu chekutanga kuita ndeyekugadziridza ruvara rwemadziro eimba yekurara pamwe nekusarudzwa kwemavara. Dzivisa kunongedza mavara kana mavara ane rima zvakanyanya nekuti anozogadzira maitiro asina kunaka.
Smart Mazano Ekugadzira Yakarongeka Kamubhedha neyekurara Kamuri Ruvara
Usati waziva iyo Kamuri reMurara wekurara iyo yakanaka kune hutano, chekutanga, ziva matipi ekugadzira imba yekurara yakasarudzika pazasi. Kamuri yakagadzikana zvirokwazvo ine kamuri yakagadzirirwa yakanyatsogadzirwa, kusanganisira kusarudzwa kwemavara epende uye fenicha kuti ikwane. Heano mamwe matipi anogona kuisirwa kugadzira kamuri yakagadzikana.
Sarudza mavara ane kudzikisira kuti asakuchengeta iwe wakamuka uye uchinzwa kusagadzikana.
Ipa fungidziro yakafara, kunyangwe mukamuri racho chaizvo riine saizi isina kukura.
Sarudza yakakodzera mutambo pakati pendi ruvara uye fenicha mukamuri. Mavara asina kwazvakarerekera anoenderana nemavara ese ari nani.
Usaunganidze zvinhu zvakawandisa mukamuri. Sarudza zvinhu zvinoshanda uye zvinodikanwa mukamuri.
Paunomuka mangwanani, iyo ruvara rweyero inogona kukubatsira kutanga zuva nekushingairira. Uyu ruvara unozoitawo kuti usave mukushushikana. Sarudza iyo yakapfava nyoro ruvara kuti irege kukuita iwe-unopfuura-kufara manheru.
Chaizvoizvo, hapana zvimwe zvidzidzo zvekare pamakamuri ekupenda mavara ayo akanaka kune hutano. Saka mhedzisiro yeruvara pamunhu mumwe nemumwe inogona kunge yakasiyana. Kunyangwe zvakadaro, sarudza iyo ruvara runoita kuti uve wakadzikama uye wakasununguka kuitira kuti urege kusangana nematambudziko ekurara uye hutano hwako hahuzovhiringidzwazve.
Ruvara rwune hukama zvakanyanya nekuravira kuitira kuti munhu wese zvechokwadi ave nesarudzo dzakasiyana. Kana iyo ruvara yaunoda isingaisirwe mune iyo ruvara inogona kuumba yakagadzika, gadzirisa kune kusarudza kwemamwe makamuri zvishongo. Ruvara rweCalmer runogona kutonga, asi hazvireve kuti hapafanire kuve nemamwe mavara anogona kukwirisa mukamuri. Saka, Nakidzwa nekutsvaga yakanyanya shanduro yako yekuBedroom Ruvara Schemes!